Dib u eegista Akhriska Nolosha | Akhrinta maskaxda ee internetka
Akhrinta maskaxda internetka > Dib u Eegista Akhriska ee Nolosha
Samee xuduudaha tooska ah ee ujrada ah ee loogu talagalay akhriska maskaxda oo aan kala go 'lahayn
Baaritaan nafsi ah oo dheeraada ka hor inta aanad shaqaaleysiin
Waad wici kartaa wicitaanada hore
Dhammaan maskaxdu waa inay ku aflaxaan imtixaanka imtixaanka iyo jeega taariikhda jinsiga si ay u shaqeeyaan LifeReader
Bixinta hordhaca ah oo kaliya $ .19 daqiiqad daqiiqadihi ugu horeysay ee 10
Fursadaha kala duwan ee isgaadhsiinta oo ay ku jiraan telefoonka, sheekada, iyo emailka
Noocyo faahfaahsan oo maskaxiyan ah oo kaa caawiya xulashada lataliyaha ugu fiican
LifeReader wuxuu bixiyay adeegyo nafsi ah illaa 2008
Dammaanad lagama bixiyo bogga internetka haddii aan ku qanacsaneyn akhriska
Qiimaha maskaxeed ayaa ka sarreeya shirkadaha kale
LifeReader waxay qaadataa nidaamkooda baaritaanka loogu talagalay cudurada maskaxda oo aad u culus, oo ay ku jiraan akhrinta imtixaanka iyo baaritaanka asluubta dembiga ee habka kireysiga. Tani waxay xaqiijinaysaa in la-taliyayaal yar oo khibrad leh iyo farshaxanno farshaxan ah ayaa la duubay, sidaa daraadeed kaliya ugu wanaagsan ee gooyo.
Mashiinka raadinta shaandhaynta ayaa aad u xaddidan fursadaha, oo kaliya oo bixiya raadinta qiimaha, qiimayaasha xiddigaha iyo kuwa ku cusub goobta. Hase yeeshee, shakhsiyaadka maskaxda ee shakhsi ahaaneed ayaa u muuqda inay ka sii badan yihiin websiyada badan ee akhrinta maskaxda, iyadoo ku xiran hadba inta uu shaqeynayo cilmu-nafsiga boggooda. U fiirso ra'yi-celiyaha latalinta si aad u heshid fikrad ah sida ay u qabtaan macaamiisha kale kahor doorashadaada.
LifeReader cilmi-nafsiga ayaa ka sarreeya waxoogaa ka badan boggaga internetka qaarkood, laakiin mid waliba wuxuu ku gudbay nidaam baaritaan oo dhamaystiran waxayna u badan tahay in la-taliyayaal khibrad leh. Si kale haddii loo dhigo, waxaad heleysaa waxa aad bixiso, ama waa inaad kiiskan. Waxaad ka faa'iideysan kartaa dalab aad u ballaaran oo lagu siinayo daqiiqadaha ugu horeeya ee 10 ee $ .19 daqiiqad, sidaa darteed waxaad isku dayi kartaa hal ama laba lataliye maskaxeed oo leh maalgashi aad u yar.
Waxaad la xiriiri kartaa lataliyaha maskaxda ee taleefanka, sheekeysiga, ama emailka, iyada oo ku xiran qofku rabitaankiisa sida ay u bixiyaan adeegyadooda. Waxaad xittaa waqti u soo diri kartaa wicitaan horay loo sii wadi karo, halkii aad isku dayi lahayd inaad ku qabato cudurka maskaxda ee aad jeceshahay.
Waa wax la yaab leh in bogga internetka si taxadar leh loo baadho daaweynta maskaxda ee ay shaqaaleysiisay, in aysan bixin nooc ka mid ah siyaasadda damaanad qaadka, ama ugu yaraan ma lahan mid ku qoran website-ka. In kastoo aad haysato fursad aad u fiican oo aad u hesho akhrin weyn markaad doorato ballan ka mid ah la taliyeyaasha maskaxda ee khibrad leh, mararka qaarkood ma aha inaad la xiriirto maskaxda gaarka ah. Dammaanad bixinaysa lacag celin ama deyn ah waxay noqon kartaa hanti weyn oo ku saabsan bogga internetka ee daaweynta nafsadda leh.
Iyadoo LifeReader, waxaa laga yaabaa inaad bixiso wax yar oo ka badan boggaga internetka ee maskaxda, laakiin waad ku kalsoonaan kartaa in lataliye kasta oo aad la xiriirto goobta uu si fiican u soo bandhigay awoodda maskaxeed iyo asaaska dembiyada. Mararka qaarkood waa u qalantaa in ay bixiso wax yar oo dheeraad ah, gaar ahaan haddii aad ku soo dhowaato hagista maskaxda sida arrin halis ah oo kaliya ma aha wax si qumman u shaqeynaya madadaalo.